Maamulaha Porsche: "IPhone-ka ayaa iska leh jeebkaaga, ee ma ahan wadada" | Wararka IPhone
Warshadaha baabuurta way kala qaybsanyihiin, qaybaha qaar waxay taageeraan gawaarida iswada ee ay soosaaraan shirkadaha Apple iyo Google kuwa kalena waa dhaleeceeyaan, sida agaasimaha guud ee Porsche. Wareysiga uu siiyay warbaahin Jarmal ah, hogaamiyaha ugu sareeya shirkada gawaarida raaxada, Oliver Blume, wuxuu xaqiijiyay in «iPhone jeebka ayaa iska leh ee wadada ma saarna«.
Sidan oo kale, Blume wuxuu dhaleeceynayaa fikradda ah in shirkadaha tikniyoolajiyadda ay isku dayayaan inay u boodaan suuq ay khibrad yar ku leeyihiin, maaddaama aysan u arkin mustaqbal mashiinnada lagu beddelayo aadanaha waddooyinka. Sanadihii la soo dhaafay, Porsche waxay soo bandhigtay qalab kala duwan oo ku socda gawaarideeda oo fududeynaya nabadgelyada wadada haddii darawalka la mashquuliyo. Porsche si iskiis ah ayey u wadi kartaa gaariga marka tooska hore u kaxeyneyso waxayna awood u leedahay inay si otomaatig ah u qabato marka gawaarida hore ay bilaabaan inay istaagaan Si kastaba ha noqotee, Oliver Blume ayaa taas xaqiijiyay Porsche wax xiiso ah uma hayaan soo saarida gawaarida awooda inay naftooda wataan.
Taasi waa sababta agaasimaha guud ee Porsche uu leeyahay diiday fikradda ah iskaashi lala yeesho shirkadaha tiknoolajiyada sida Apple oo kale inay u hirgeliso sirdoonka macmalka ah ee gawaarida (sidaa darteed "iPhone-ka ayaa iska leh jeebkeena oo aan ku jirin wadada").
Qaarkood hadalo xoogaa khatar ah kuwa agaasimaha guud ee Porsche, iyada oo la tixgelinayo in ay u muuqato in warshaduhu u socdaan mustaqbal leh baabuur iswada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Maamulaha Porsche: "IPhone-ka waxaa iska leh jeebkaaga, wadada maahan"
Waxaan u maleynayaa inay aad ufiican tahay imaatinka Porsche, hadii aan iibsado mid waxay noqon laheyd inaan ku raaxeysto xaaladeeda, kaligey igama qaadin.
Ku jawaab danim1
3DPT, ciyaar bilaash ah oo lagu hubiyo saxsanaantaada 3D Touch